Inona no hohanina raha mijaly hypoglycemia? -Diabetes Diabetes-Sinocare
Inona no hanina raha mijaly hypoglycemia?
Fotoana: 2019-10-24 Hits: 599
Inona no sakafo tokony hofidintsika hampiakarana siramamy ra haingana rehefa mijaly hypoglycemia? Ny sakafo samihafa dia samy manana ny index glycemika isan-karazany. Ireo sakafo misy index glycemie avo dia miteraka fiakaran-siramamy ra haingana. Anisan'izany, ny glucose indrindra (ny index glycemic dia 100), manaraka ny mofo fotsy (88), ny tantely (73), ny cracker soda (72), ny siramamy fotsy (65), ny millet congee (62), ny ranom-boasary (57 ), sôkôla (49), Juice paoma (41) ary Coca Cola (40).
Rehefa mijaly hypoglycemia isika dia tsy mihinana fotsiny ny sakafo misy tavy na proteinina (toy ny gilasy). Satria ny tavy dia mety hampihena ny fahaverezan'ny vavony sy hampihena ny anjara asan'ny gliosida, izay mahatonga ny siramamy ra tsy hiakatra vetivety ao anatin'ny fotoana fohy, fa ny fanentanana hypoglycemia kosa dia hitarika ny marary hanohy hihinana sakafo bebe kokoa, ka hiteraka fifehezana glucose amin'ny ra.
Mila jerena izany raha misy fanafody hypoglycemic an'ny marary α- inhibitor glukosidase (toy ny acarbose, Basen, sns.), tsy manampy rano siramamy fotsy, ranom-boankazo, biskoitra, bun misy steamed ary sakafo hafa misy disaccharides na starchy izy ireo. Satria ireo fanafody ireo dia afaka manakana ny gliosidrat ho lasa glucose, ary tsy afaka mitsabo haingana ny glucopenia. Ka ilay marary rehefa avy naka ilay α- Tokony hisafidy takelaka glucose na rano glukosa ny mpanakana ny glucosidase rehefa mitranga ny hypoglycemia.
Rehefa ny glucose ao amin'ny mararin'ny diabeta dia ≤3.9mmol / L, mila manampy glucose na sakafo misy siramamy izy ireo. Ny hypoglycemia mafy dia tokony hitondra fitsaboana sahaza azy arakaraka ny fahatsiarovan-tena sy ny tosi-glucose ao anaty ra. Rehefa siramamy amin'ny ra dia ≤3.9mmol / L, raha mazava ny zavatra fantany dia afaka mandray gliosida 15-20 grama izy (aleony ny glucose); Andraso mandritra ny 15 minitra handrefesana ny siramamy ao anaty, raha mbola misy ny siramamy amin'ny rà≤3.9mmol / L, ary avy eo mihinana glucose glioma 15 grama, refeso indray ny glucose amin'ny ra, hahazoana antoka fa mihoatra ny 3.9mmol / L izany. Raha manana fikorontanana amin'ny fahatsiarovan-tena ireo marary dia tokony hiantso ny telefaona vonjy maika any amin'ny hopitaly isika mba hotsaboina. Ny gliosida 15 grama dia azo avadika ho ireto sakafo manaraka ireto: gliokaozy 15 grama (na siramamy fotsy, siramamy volontsôkôla), tantely 20 grama, soda 200 Juice ranom-boasary (na kolaola, voasarimakirana mitovy habe aminy ihany ), Ranom-boasary 50 grama, mofo 25 grama (mofo voadidy 2/3), biskoitra 20 grama (bisikileta soda miisa 3) sns.
Pejy mialoha: Inona no tokony hodinihintsika amin'ny fanatanjahan-tena?
Pejy manaraka: Rehefa mifady hanina ny haavon'ny glucose amin'ny ra dia ambany noho ny mahazatra ...